News Collection: 'नेपालीहरूलाई सेक्स गर्न आउँदैन'
'नेपालीहरूलाई सेक्स गर्न आउँदैन'
नेपालमा यौनका विषयमा खुलेर कुरा गरिँदैन। यौनका बारेमा जति चर्चा गरिन्छ, या त त्यसलाई असाध्यै जटिल बनाइन्छ, या अति नै हलुका। फलस्वरूप यो कतिपयका लागि चर्चा गर्न अयोग्य विषय भएको छ भने धेरैका लागि अतिरञ्जित विषय। फ्रायडले धेरै अघि मानिसका सबै जसो क्रिया यौनमा आधारित हुन्छ भन्ने व्याख्या गरिसक्दा पनि फ्रायड पढेको नेपाली बौद्धिक वर्गले पनि यसलाई स्वीकार गर्न सकिरहेको छैन। यो गम्भीर विषयमा मनोविज्ञ करुणा कुँवर भने प्रस्ट छिन्।
१२ वर्षदेखि मनोविज्ञान त्यसमा पनि पारिवारिक तनावका विषयमा अध्ययन- अनुसन्धान गरिरहेकी करुणा, नेपालीको यौनमनोविज्ञान जटिलतातर्फ उन्मुख हुँदै गएको बताउँछिन्। नेपालीहरूको यौन व्यवहार एवं त्यसले सिर्जना गरिरहेको तनावले धेरै युगल जोडीको वैवाहिक सम्बन्ध टुट्दै गएको उनको अनुसन्धानले देखाएको छ। जर्मन मनोवैज्ञानिक दोरोभी वे नरकी शिष्य करुणासँग यसपटक साप्ताहिकले नेपालीहरूको यौन मनोविज्ञानका विषयमा खुलेर कुरा गर्‍यो।
तपाईंसँग उपचारका लागि धेरै युगल जोडी आउने गरेका छन्, युगल जोडीका मुख्य समस्या के-के रहेछन् ?
धेरै जोडी विवाहको पाँच-सात वर्षपछि समस्या लिएर आउँछन्। त्यो बेला उनीहरूको सम्बन्ध लगभग टुटिसकेको हुन्छ। एक-अर्कामा दोषारो पण गर्दा उनीहरू घर ढिला आउने, रक्सी पिउने, समय नदिने अथवा श्रीमतीले किचकिच गर्ने, अनावश्यक खर्च गर्ने भनेर दोष लगाउँछन्, तर विवाहको पहिलो वर्ष त्यही व्यवहार किन नराम्रो लागेन भनेर प्रश्न गर्‍यो भने उनीहरू मौन रहन्छन्। पहिलो वर्ष उनीहरूलाई त्यहि व्यवहार नराम्रो लाग्दैन, कारण उनीहरूको यौनसम्बन्ध त्यसबेला अहिलेको तुलनामा धेरै राम्रो हुन्छ। त्यो बेला उनीहरू एक-अर्कालाई समय दिन्छन्, एक-अर्काको रूप र व्यक्तित्वको बखान गर्छन्। जसै विवाह पुरानो हुँदै जान्छ, ती क्रियाकलापमा कमी आउँछ, अनि सम्बन्ध बिग्रन थाल्छ।
यसको कारण पनि सेक्स नै हो। तपाईं हामी सबैले दर्जनौ यस्ता जोडी देखेका छौं, जो यति झगडा गर्छन्, कुटाकुट गर्छन् कि भोलि नै छुट्न सक्छन् भन्ने हामीलाई लाग्छ। वास्तवमा उनीहरूलाई छुट्टिन नदिने कारण सेक्स नै हो। सेक्सका बेला यी दुईबीच जुन प्रेम प्रकट हुन्छ, त्यो छुट्टिसकेपछि नपाइने मनोविज्ञानका कारण उनीहरू जे-जस्तो सहेर पनि बसिरहेका हुन्छन्। सेक्सका समयमा शारीरिक सुगन्ध एक -अर्काले वर्षौसम्म पाएका हुन्छन्, छाला-छालाबीचको घर्षण पि्रय हुन्छन्। कतै न कतै त्यो पि्रय क्षण मनको अन्तरमा बसेको हुन्छ, त्यसैले उनीहरूलाई छुट्टनि दिएको हुँदैन। एक जना लेखकले कतै भनेका छन्, नजिकै प्रहरी चौकी छ, सहयोग गर्ने वकिलहरू छन्, प्रशस्त कानुन छ, यद्यपि एउटी महिला पुरुषको यातना खेपेर वर्षौदेखि बसिरहेकी छे। किन ? किनभने ऊ त्यो व्यक्तिको सेक्समा रमाएकी छे।
विवाहको पहिलो वर्ष महिलाहरू श्रीमान्प्रति जति समर्पित हुन्छन्, त्यसमा सन्तान जन्मिएपछि कमी आउँदै जान्छ। उनीहरूको ध्यान श्रीमान्भन्दा छोरा-छोरीप्रति जान्छ तर पुरुषले श्रीमतीबाट त्यही व्यवहार चाहन्छ। त्यो नपाएपछि उसले बाहिर आँखा लगाउन थाल्छ। मकहाँ आउने धेरै समस्या पनि यसैसँग सम्बन्धित छन्। त्यसैले पनि मलाई पारिवारिक समस्याको मूल जरो कतै न कतै यौनसँग सम्बन्धित हुन्छ भन्ने लाग्न थालेको छ।
नेपालमा एकथरी महिला छन्, जसका लागि यौन लाजको विषय हो, तर अर्काथरी महिला यस्ता पनि छन्, जो खुला रूपमा सेक्सका कुरा गछर् न् र आफ्नो स्तनलाई नै आकर्षणको केन्द्र बताउँछन्, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
किनभने हामीमा यौनका विषयमा शिक्षा नै भएन। आमाले हुर्कंदै गरेकी छोरीसँग, बुबाले उमेर बढ्दै गएको छोरासँग खुलेर कुरा गरेनन्। उनीहरूले यसलाई लाजको विषय भने। शिक्षक-शिक्षिकाले पनि त्यसलाई गोप्य भनिदिए। यसरी जोबाट यौनका विषयमा खुलेर कुरा आउनुपर्ने हो, उनीहरूबाटै गलत भनेर लाञ्छना लगाइएपछि विचरा यौन कलंकित हुने नै भयो। म सभ्य छु भन्नेहरू नै यसलाई नराम्रो भन्न बाध्य भए। यो हाम्रो शिक्षाको दोष हो, हाम्रो संस्कारको दोष हो।